Ashiye angalazi amakhasimende kaMTN ‘adlelwe’ ama-data ne-airtime | News24
Johannesburg – Amakhasimende enkampani yezokuxhumana, uMTN, aseshiye angalazi kule nkampani ngenxa yokuthola ama-bill ezimali ezinkulu ngemuva kokuthi le nkampani ixwayise ngokuthi amakhasimende azophelelwa ama-data.
Phambilini kuleli sonto, uMTN uthe isizathu sokuthola ama-bill amakhulu okusebenzisa amaselula kanye nokuphela kwama-data kungaba ngenxa yokushintshela kwiselula enobuchwepheshe besimanje, i-smartphone, ukuqala kokusetshenziswa kwe-4G kanye nokusebenzisa izinkundla zokuxhumana.
Kodwa-ke noma kunjalo abafundi beFin24 bakhwele badilika kule nkampani yezokuxhumana, bathi uMTN “usemkhankasweni wokuqola” amakhasimende awo.
“UMTN ubulukhu uqola umphakathi eminyakeni engu-20 eyedlule. Awusoze waba nesicelo solwazi esiyimpumelelo. U-Icasa awunamazinyo futhi awenzi lutho ngezingcingo ezinqamukayo zaMTN kanye nokubizwa imali ngokwedlulele,” kusho umfundi weFIN24, uJohn.
“UMTN yiqulu lezigelekeqe, ama-data eselula awasasebenzi, ngifake i-airtime ka-R50. Ngifone u-30 seconds, ngokuphazima kweso [sekuphele i-airtime]. Okukuqala ngacabanga ukuthi mhlawumbe yifoni yami, kwaze kwaba abantu abaningi baqala ukukhononda ngezinkinga ezifanayo,” kusho uTiphany, engeza ngokuthi uhluleka nawukubala ukuthi bangaki abantu abakhala ngenkinga efanayo.
“Abaqambi manga nezigebengu (uMTN)… I-CEO ithola amabhonasi amakhulu bese benquma ukunqamula ukusebenza kwama-data,” kusho uSean.
“UMTN uqola abantu futhi ngoba bayazi ukuthi abantu angeke bakwenze into enkulu, bayaqhubeka. Ngilahlekelwe uR400 ngesonto, hlanganisa nezigidi zabantu ezilahlekelwa ama-data… ucabanga ukuhti yimalini asebeyenzile ngemisebenzi abangayenzanga?” kusho omunye umfundi weFin24, uStacie.
Kodwa-ke uMTN uthi uwalulekile amakhasimende ukuthi acofe u-*141*1*7852#, noma avakashe ezitolo zakwaMTN.